China TS-1 latabatra fiasan'ny hydraulic mekanika vy ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy fandidiana amin'ny ankapobeny | Wanyu
Amboary ny haavon'ny haavon'ny fandriana amin'ny alàlan'ny kapila hydraulic, ary ahodino ny zoro amin'ny lovia eo an-damosin'ireo fitaovana fanampiana fanampiny.
Ny fototra miendrika T ny latabatra fandidiana hydraulic dia milamina ary afaka manome dokotera miasa mandritra ny fotoana lava ampy.
Misy safidy roa ny lovia tongotra tsy miova sy ny vodin-tongotra misaraka, mety ho an'ny olona manana filan'ny mpanjifa samy hafa.
Ny fototra ergonomika miorina amin'ny T latabatra fandidiana tanana dia tsy hoe miorim-paka sy mihetsika ihany, fa manome dokotera ihany koa ny halavan'ny tongotra hampihenana ny havizanana mandritra ny asa maharitra.
2. Tetezana voa voaorina
Ny tetezana voadio ao anatiny dia mety hiakatra 110mm, izay mora amin'ny dokotera manao fandidiana voa.
3. Fitaovana isan-karazany
Ireo kojakoja mahazatra dia misy ny fanohanana ny soroka, ny soroka, ny vatan'ny vatana, ny efijery fanatoranana ary ny fanampiana ny tongotra hanamorana ny asa samihafa.
4. Rafitra fiakaran'ny hydraulic
Izy io dia tarihin'ny hydraulically, ary ny haavon'ny latabatra fiasan'ny mekanika dia ahitsy amin'ny pedal tongotra. Milamina sy mangina izy io. Afaka miasa ara-dalàna izy io na dia maty aza ny herinaratra. Ho an'ireo faritra misy herinaratra tsy milamina dia azo fidina ny latabatra fandidiana hydraulic.
5. Takelaka misy tongotra na takelaka misaraka
Misy kinova tsotsotra amin'ny takelaka tongotra amin'ny ankapobeny, tsara ny vidiny. Misy koa lovia tongotra misaraka, izay azo ahitsy ambony sy ambany, ary azo itarina any ivelany mba hanamorana ny fandidiana rantsana ambany.
Model item Tabila fiasa mekanika TS-1
Ny halava sy ny sakany 1980mm * 500mm
Fiakarana (ambony sy ambany) 950mm / 750mm
Takelaka miverina (ambony sy ambany) 75 ° / 30 °
Trendelenburg / Reverse Trendelenburg 20 ° / 30 °
Previous: TF Fiasan-dresaka TF Hydraulika sy Manual
Manaraka: TY Tabilaon'ny fandidiana Hydraulika Manual ho an'ny efitrano fandidiana